मुगुमा भ्रष्ट ईन्जिनियरलाई विप्लवको कालोमोसो, भ्रष्टचारीहरुलाई चेतावनी ! – On Khabar
सरकारी कर्मचारी होसियार, विप्लवको कारबाहीमा परिएला !
पुस ८, मुगु
मुगु : मुगुमा सरकारी योजनामा अनियमितता गर्दै आएका महेष कठायतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार कालोमोसो दलेर कारबाही गरेको छ । अहिले पनि हरेक योजनाको १० प्रतिशतको दरले असुल्दै आएको थाहा पाएपछि निजमाथि सदरमुकाम गमगढीमा कालोमोसो दलि जनकारबाही गरेको नेकपाले जनाएको छ ।
मुगुमा छाँयानाथ रारा नगरपालिकाको ईन्जिनियर महेष कठायतले गत वर्षमा सीआईपी सामुदायिक सिचाइ योजनाका उपभोक्ताहरुबाट १० प्रतिशतका दरले असुल्ने गरेका थिए ।
महेष कठायतलाई नेकपाले विगत देखि यसरी अनियमितता नगर्न पटक पटक चेतावनी दिंदै आएको तर बेवास्ता गर्दै अनियमितता गर्दै आएपछि निज कठायतलाई जनकारबाही गरेको नेकपाले जनाएको छ । स्थानीय बासीले हरेक योजनामा रकम असुल गरेको गुनासो समेतलाई ध्यानमा राखेर कारबाही गरेको एक नेताले बताए ।
काठमाडौं– शनिबारदेखि जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबारबाट सदस्यहरुले धारणा राख्न सुरु गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा १० स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बोल्नेमध्ये अधिकांश नेताहरु नेतृत्व ९अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड० विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता घनश्याम भुसालले पार्टीमा नश्लवाद हावी भएको भन्दै […]